Tonga any Boom Beach | ny fanilo | Androidsis
Boom Beach, toy ireo lohateny roa hafa ananan'i Supercell ao amin'ny Play Store, matetika dia mahazo fanavaozana mahavariana indraindray izay mampiditra andiana zava-baovao amin'ity lohateny tsara ho an'ny Android ity. Rehefa avy nahazo Krismasy maromaro Fanavaozana ny Andro Hay, Clash of Clans na Boom Beach, androany no fotoana anaovana iray vaovao amin'ity lalao video farany ity.
Fanavaozana vaovao ho an'ny iray amin'ireo lalao multiplayer lamaody ho an'ny Android ary izany dia eo anelanelan'ny zava-baovao ananany dia hanana miaramila vaovao ianao hahatonga anao any amin'ny toby fahavalo, na dia manampy ny hery miasa na fianakavianao aza. Ity singa vaovao ity dia miavaka amin'ny maha lehibe azy amin'ny fiadiana izay hampihena ny zava-drehetra amin'ny lalany mankany lavenona. Ity ny lisitry ny fiasa vaovao izay mampitombo ny kalitaon'ity lalao video Supercell tsara ity mifanaraka amin'izany.
1 Ilay mpanilo miandry baiko
1.1 Fanavaozana vaovao
2 Singa stratejika bebe kokoa
Ilay mpanilo miandry baiko
Ny fanavaozana teo aloha nitondra singa vaovao iray hafa, izany indrindra ilay grenady, mpiady izay tompon'andraikitra amin'ny manipy grenady havia sy havanana lavitra be. Ny fisehoan'ny singa vaovao iray hafa dia fanovana tsara ny paikady harahina rehefa te-hanafoana ireo mpilalao fahavalo ananantsika amin'ny sari-tanintsika malalaka isika. Ny singa vaovao dia mifantoka amin'ny halehiben'ny habeny miaraka amin'ny fiadiana ary heverina fa manana hery mitifitra avo.
Ireo zava-baovao hafa dia avy amin'ny biby vaovao ao amin'ilay nosy, rafitra fanamarihana stratejika vaovao momba ny herinaratra hananana fampahalalana tsara kokoa, ny fahafantarana ny antontan'isa nomen'ireo sarivongany ny fahavalo sy ny fizarana vaovao an'ireo toby herinaratra. Ireo bitsika hafa dia kely indrindra nefa misy fiovana eo amin'ny paikady, ny ady ary ny fomba fandaminana ny fototra. Ity ambany ity ny lisitra.
Andiana miaramila vaovao: ny fanilo, tarika lehibe misy fiadiana
Bibikely vaovao ao amin'ny nosy ary nanampy ny mponina tao amin'ilay lalao
Rafitra vaovao naoty stratejika ny toby misy ny herin'ny hery miasa
Manontany vaovao momba sarivongana an'ny mpanafika
Vaovao fizarana amin'ireo toby herinaratra
Ankehitriny ilay grenady manipy grenady haingana kokoa ary mitohy
Ny fanafainganana ireo sarivongana hiatoana ho azy mandritra ny asa fikojakojana
Ny tafondro, ny tafondro ary ny fitrandrahana baomba tsy hiatrika fahasimbana indroa intsony ho an'ny fiara mifono vy
Miatrika fahasimbana bebe kokoa ny fiara mifono vy ary mampiofana haingana kokoa, saingy tsy dia salama
El nilatsaka ny vidin'ny sabotage
Ny tompon'andraikitra ihany no afaka mandroaka mpikambana ny hetsiky ny lahasa isaky ny 20 minitra
ny loko sambo nihatsara ny fidinana an-tsambo
Singa stratejika bebe kokoa
Ankehitriny dia hanana safidy sarotra kokoa isika mifidy izay karazana mpiady hapetraka amin'ny sambo noho ny fampidirana ny fanilo miampy ny fisehoan'ny grenady voalohany. Antenaina fa miaraka amin'ity zavatra ity dia hitombo kokoa ny zavatra ary hahita fahasamihafana bebe kokoa amin'ireo mpanafika isika, zavatra iray mila ovaina satria ny sasany tsy mieritreritra be momba izany rehefa mamorona ny vondron'ireo miaramila.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Miandry anao eny an-tsahan'ady ny fanilo miaraka amin'ny fanavaozana Boom Beach vaovao
Voaloboka, fampiharana amin'ny fanovana sary misy sivana isan-karazany